ဘိုးအင်း P8-တစ်ဦးက Poseidon မှာ
ဘိုးအင်း P8-တစ်ဦးက Poseidon မှာ3ပတ်6days ago #1853
ငါမကြာသေးမီကအဘို့အ Boeing P8-A Poseidon ကို download လုပ်ပါ P3D4 ကအလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ မေးခွန်းကတော့ကျွန်ုပ် GPS ကိုအဆင့်မြှင့်ချင်သည်ဆိုသော်ငြား၎င်းတို့သည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဖိုင်မဟုတ်ပါ P3D4 listing this aircraft?. I know that I need to edit the panel file to upgrade the GPS but there is no file to edit. Why doesent the aircraft file show up in the SimObjects folder in P3D4 ??
ဘိုးအင်း P8-တစ်ဦးက Poseidon မှာ2ပတ်5days ago #1872
rikoooo မှမည်သူမဆိုဤပြproblemနာကိုဖြေနိုင်ပါသလား ?????
0.191 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်